YANDEX NTỌALA NCHỌGHARỊ - YANDEX - 2019
Ntọala Yandex Nchọgharị
Mgbe ị wụnye usoro ihe omume ahụ, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịhazi ya iji mee ka ọ dịkwuo mfe iji n'ọdịnihu. Otú ahụ ka ọ dị na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla - ịtọ ya maka onwe gị na-ahapụ gị ka ị gbanyụọ atụmatụ ndị na-adịghị mkpa ma bulie interface.
Ndị ọrụ ọhụrụ nwere mmasị mgbe niile iji hazie Yandex.Browser: chọpụta menu n'onwe ya, gbanwee ọdịdị, mee ka atụmatụ ndị ọzọ. Nke a dị mfe ịme, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ndabara ndabara adịghị atụ anya ya.
Ntọala nhọrọ na atụmatụ ya
Ị nwere ike tinye ntọala nchọgharị Yandex site na iji bọtịnụ NchNhr, nke dị na akuku aka nri elu. Pịa na ya ma site na ndepụta ndọpụta-ahọrọ nhọrọ "Ntọala":
A ga-akpọrọ gị gaa na ebe ị nwere ike ịhụ ọtụtụ n'ime ntọala ahụ, ụfọdụ n'ime ha kacha mma gbanwere ozugbo ị wụnye ihe nchọgharị ahụ. Ntọala ndị ọzọ ka enwere ike ịgbanwe mgbe ị na-eji ihe nchọgharị ahụ.
Ọ bụrụ na i nweela akaụntụ Yandex ma nwee ike ịme ya na ihe nchọgharị weebụ ọzọ ma ọ bụ na smartphone gị, mgbe ahụ i nwere ike ịnyefe ihe edokọbara gị, okwuntughe, akụkọ ihe mere eme na ntọala sitere na ihe nchọgharị ọzọ na Yandex Browser.
Iji mee nke a, pịa "Kwado mmekọrịta"ma tinye nbanye / paswọọdụ njikọ iji abanye. Mgbe ị gafechara ikike, ị ga-enwe ike iji data njirimara gị niile. N'ọdịnihu, ha ga-ejikọta n'etiti ngwaọrụ ka ha na-emelite.
Ihe ndi ozo: Ntọala mmekọrịta na Yandex Browser
N'ebe a, ị ga-enwe ike ịgbanwe nyocha nchọgharị. Na ndabara, enwere ike ime ntọala niile, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ n'ime ha, ị nwere ike ịgbanye ha ngwa ngwa.
Gosi Ogwe Ibe edokwubara
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị ibe edokọbara, wee họrọ ọnọdụ "Mgbe niile"ma ọ bụ"Naanị na scoreboard"N'okwu a, otu panel ga-apụta n'okpuru ebe adreesị nke saịtị ahụ ebe a ga-echekwa saịtị ndị ị zọpụta. Mkpanaka bụ aha nke ọhụrụ taabụ na Yandex Browser.
Site na ndabara, n'ezie, enwere nyocha engine Yandex. Ị nwere ike itinye engine ịchọpụta ọzọ site na ịpị "Yandex"ma na-ahọrọ nhọrọ a chọrọ n'aka menu menu.
Mgbe ịmalite imeghe
Ụfọdụ ndị ọrụ na-achọ imechi ihe nchọgharị ahụ na ọtụtụ taabụ ma chekwaa nnọkọ ruo mgbe mmeghe ọzọ. Ndị ọzọ na-achọ ịme nchọgharị weebụ dị ọcha n'oge ọ bụla na-enweghị otu taabụ.
Họrọ kwa ihe ga-emeghe oge ọ bụla ịmalite Yandex. Nchọgharị - Ntụala ma ọ bụ na-emepe taabụ.
Ọtụtụ ndị na-eji eziokwu ahụ bụ na taabụ dị n'elu ihe nchọgharị ahụ, ma e nwere ndị chọrọ ịhụ panel a na ala. Gbalịa abụọ, "N'elu"ma ọ bụ"N'okpuru"ma kpebie nke kachasị gị mma.
O doro anya na ị jirila ihe nchọgharị ọzọ na Ịntanetị tupu i tinye Yandex. N'oge ahụ, ị ​​jisiri ike "dozie" site na ịmepụta ibe edokọbara nke saịtị ndị na-adọrọ mmasị, ịtọzi oghere ndị dị mkpa. Ịrụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị weebụ dị ọhụrụ dị ka ihe dị mma dị ka nke gara aga, ịnwere ike iji ọrụ ntanetị data site na ochie nchọgharị gaa na nke ọhụrụ. Iji mee nke a, pịa "Ntinye edokọba na ntọala"ma soro ntuziaka nke onye inyeaka.
Site na ndabara, ihe nchọgharị ahụ na-eji àgwà Turbo mgbe ọ bụla ọ na-ejikọ nwayọọ nwayọọ. Gbanyụọ atụmatụ a ma ọ bụrụ na ịchọghị iji ọsọ ọsọ Ịntanetị.
Ihe ndi ozo: Ihe niile banyere ọnọdụ Turbo na Yandex Browser
Na ntọala ndị a dị oke, ma ị nwere ike pịa "Gosipụta ntọala dị elu"ebe e nwekwara ụfọdụ parameters bara uru:
Okwuntughe na ụdị
Site na ndabara, ihe nchọgharị ahụ na-echeta na okwuntughe abanye na saịtị ụfọdụ. Ma ọ bụrụ na ejiri kọntaktị ahụ na kọmpụta ọ bụghị naanị site n'aka gị, mgbe ahụ ọ ka mma iji gbanyụọ ọrụ "Kwadoro akpachasị onwe gị na otu click"na"Na-atụ aro ichekwa okwuntughe maka weebụsaịtị.".
Yandex nwere njirimara dị mma - azịza ọsọ ọsọ. Ọ na-arụ ọrụ dika nke a:
Ị na-eme ka okwu ahụ ma ọ bụ ahịrịokwu ị nwere mmasị dị na ya;
Pịa bọtịnụ ahụ na triangle nke gosipụtara mgbe ịhọrọ;
Nchịkọta nhọrọ na-egosiputa ngwa ngwa ma ọ bụ nsụgharị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị a, lelee igbe dị n'akụkụ "Gosi azịza ọsọ ọsọ na Yandex".
Na ngọngọ a ị nwere ike ịhazi font, ma ọ bụrụ na ọkọlọtọ adịghị afọ ojuju. Ị nwere ike ịgbanwe ma ụdị font na ụdị ya. N'ihi na ndị nwere anya na-adịghị mma nwere ike ịba ụba "Oju akwukwo".
Ihe dị oke mma nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dị iche iche na ihe nchọgharị ahụ, na-ebugharị òké na ụfọdụ ntụziaka. Pịa "Gụkwuo"iji chọpụta otú o si arụ ọrụ na ọ bụrụ na ọrụ ahụ na-amasị gị, ịnwere ike iji ya ozugbo ma ọ bụ gbanyụọ ya.
Nke a nwere ike ịba uru: Hotkeys na Yandex Nchọgharị
Mpaghara Yandex.Browser ntọala ntinye ebudatara na faịlụ nchekwa Windows. O yikarịrị ka ọ ga-adịrị gị mma iji chekwaa nbudata na desktọọpụ ma ọ bụ na nchekwa ọzọ. Ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nbudata site na ịpị "Gbanwee".
Ndị na-eji nhazi faịlụ mgbe nbudata n'ime nchekwa ga-adị mfe karị iji ọrụ ahụ "Jụọ mgbe ị ga-echekwa faịlụ".
Na ohuru taabụ, Yandex. Nchọgharị na-emepe ngwá ọrụ nke a na-akpọ Scoreboard. Nke a bụ akara akwụkwọ, ibe edokọbara, ibe edokọbara anya na Yandex.DZen. Nakwa na osisi ị nwere ike itinye onyinyo ahụ ọhụụ ma ọ bụ foto ọ bụla ịchọrọ.
Anyị edeworị banyere otu esi edozi osisi ahụ:
Esi gbanwee ndabere na Yandex Browser
Otu esi enyere ma gbanyụọ Zen na Yandex Browser
Esi eme ka ọnụ ọgụgụ ibe edokọbara dị elu na Yandex Browser
Yandex. Nchọgharị nwekwara ọtụtụ mgbatị e wuru na nke meziwanye ọrụ ya ma mee ka ọ dịkwuo mfe iji. Ị nwere ike ịbanye na tinye-on ozugbo site na ntọala site na ịgbanwu taabụ:
Ma ọ bụ site na ịga na Nchọta na ịhọrọ "Mgbakwunye".
Nyochaa ndepụta nke mgbakwụnye agbakwunyere ma gụnye ndị ị ga-achọta bara uru. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ ndị na-akwado nje, ọrụ Yandex, na ngwaọrụ maka ịmepụta ndenye ihuenyo. Mana enweghi ihe mgbochi na itinye ntinye - ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla ịchọrọ.
Lee kwa: Na-arụ ọrụ na tinye-ons na Yandex Browser
N'okpuru ala nke ibe ị nwere ike pịa "Ihe ntanetị ngwaahịa maka Yandex Nchọgharị"iji họrọ tinyekwuo ndị ọzọ bara uru.
Ị nwekwara ike ịwụnye ndọtị si na ụlọ ahịa dị na Google site na Google.
Kpachara anya: nkwụnyekwu ndị ị wụnye, na iji nwayọọ na ihe nchọgharị ahụ nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ.
N'ebe a, Yandex. Ntọala nyocha nwere ike ịre zuru ezu. Ị nwere ike ịlaghachi azụ mgbe ọ bụla n'ime omume ndị a ma gbanwee oke nhọrọ. Na usoro nke na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị weebụ, ị nwekwara ike ịgbanwe ihe ọzọ. Na weebụsaịtị anyị, ị ga-ahụ ntụziaka iji dozie nsogbu dị iche iche na nsogbu metụtara Yandex.Browser na ntọala ya. Nwee iji!